Mamorona fampielezan-kevitra Twitter tsotra miaraka amin'ny IFTTT | Martech Zone
Mamorona Fanentanana Twitter Tsotra miaraka amin'ny IFTTT
Alarobia, Aprily 3, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany maraina isika namoaka momba ny Twitter ary ny sasany amin'ireo torohevitra tsara omen'izy ireo orinasa. Iray amin'ireo sosokevitra manan-danja indrindra ny fampiasana andiana bitsika hampitombo ny fahalianany sy hampiroborobo ny fifaninanana na hetsika iray. Raha tsy mampiasa fitaovana toa izany ianao Hootsuite handaharana ireo bitsikao (izany ny rohy fiarahamiasa aminay), avy eo dia mila fomba hafa handaminana sy handaminana ireo bitsikao ianao.Hootsuite na dia manana uploader be aza ianao hahafahanao manomana ny sioka hivoaka ao Excel ary mampakatra azy ho rakitra CSV!
Fitaovana maimaimpoana tsotra sy mahery vaika maty iray any IFTTT, Raha Ity dia Izay. Misy a feo of lehibe fomba fahandro any ivelany ho an'ny orinasa sy marketing. Amin'ity tranga ity dia azontsika atao ny mampiasa ny mpandahatra fotoana handrafetana ireo sioka.
Safidio ny mpandrindra, apetraho ny datinao, ary soraty ny siokanao… tsotra be izany. Aza hadino ny mampiditra rohy azo refesina mampiasa bit.ly na serivisy mitovy amin'izany. Izahay dia manana fanafohezana URL nohavaozina fanao ao Hootsuite, koa!).
Eo ianao. Manangana Tweet na iray herinandro na roa, angamba 2 ka hatramin'ny 3 isan'andro, ary manana ny fampielezan-kevitra amin'ny Twitter ianao. Fanamarihana iray: ny mpandrindra fandaharana dia hanetsika ny hetsika isan-taona… ka aza hadino ny manala ny fomba fahandro raha tsy mikasa ny hanao fampielezan-kevitra ianao isan-taona!
Tags: mpandrindra bitsika maimaim-poanaraha izany dia izanyiftttfomba fahandro iftttbitsika fandaharam-potoanafampielezan-kevitra twitterrecette fampielezana twitter
Paikady fandraharahana amin'ny endri-tsoratra 140 na ambany
Twilert: Fanairana mailaka maimaim-poana avy amin'ny Twitter
Apr 3, 2013 amin'ny 8: 36 AM
Misaotra tamin'ny fampifandraisana ny lahatsoratra ifttt nataoko tao amin'ny SocialMediarology.com!